မျက်မမြင်များအတွက်မျှော်လင့်ချက် - ဆွစ်ဇာလန်၏ကမ္ဘာချီဘုရားရှိခိုးကျောင်း
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2018-03 > မျက်မမြင်မျှော်လင့်ပါတယ်
လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်း၌မျက်မမြင်တစ် ဦး သည်သူ့ပတ်လည်၌အော်ဟစ်နေသည်။ သူသည်ယေရှု၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်လိုပြီးကောင်းချီးများစွာခံစားနေရသည်။ ယေရိခေါမြို့ကနေလမ်းမှာ Timaeus ရဲ့သားမျက်မမြင်သူတောင်းစား Bartimaeus လမ်းဘေးမှာထိုင်နေတယ်။ သူသည်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရန်သူတို့၏မျှော်လင့်ချက်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သူများစွာအနက်မှတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အခြားသူများ၏ရက်ရောမှုအပေါ်မူတည်သည်။ ငါတို့အများစုဟာဘာတီမီးယပ်စ်လိုဘဝကိုရှင်သန်နိုင်ဖို့အတွက်မုန့်ကိုတောင်းဖို့တကယ်ကိုနားလည်ဖို့ဒီအခြေအနေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမခန့်ထားနိုင်ဘူးထင်တယ်။
Jesus durchzog Jericho mit seinen Jüngern und einer grosse Menschenmenge. «Als Bartimäus sie hörte, forschte er, was das wäre. Sie verkündeten ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Er rief: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner»! (aus Lukas 18,36-38). Er begriff sofort, dass Jesus der Messias war. Der Symbolgehalt der Geschichte ist bemerkenswert. Der Mann wartete, dass etwas geschah. Er war blind und konnte selbst nichts tun, um seine Situation zu ändern. Als Jesus durch seine Stadt zog, erkannte ihn der Blinde sofort als den Messias (der Gesandte Gottes), der ihn von seiner Blindheit heilen konnte. Also schrie er laut, um die Aufmerksamkeit auf seine Notlage zu lenken und zwar so sehr, dass die Leute in der Menge zu ihm sagten: «Sei still - hör auf zu schreien!» Aber der Wiederstand liess den Mann nur noch hartnäckiger auf seiner Bitte bestehen. «Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her! Sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf! Er ruft dich! Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm: Rabbuni (mein Meister), dass ich sehend werde. Jesus sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege» (Markus 10,49-52) ။
သင်သည် Bartimaeus ကဲ့သို့အခြေအနေမျိုးတွင်ရောက်နေသလား။ သင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမမြင်နိုင်သည်ကိုသင်မြင်ပါသလား၊ သင်အကူအညီလိုအပ်ပါသလော။ သူတစ်ပါး၏မက်ဆေ့ခ်ျများကိုသင်ကြားကောင်းကြားဖူးလိမ့်မည်။ စိတ်အေးအေးထားပါ - ယေရှုသည်သင်တို့နှင့်ဆက်ဆံရန်အလုပ်များလွန်းသည်။ ယေရှု၏တပည့်တော်များနှင့်နောက်လိုက်များ၏သတင်းစကားမှာ - ဟဗက္ကုတ်သည်ရဲရင့်စွာမတ်တတ်ရပ်ပါ။ မင်းသူ့ကို
သင်ရှာဖွေသော“ စစ်မှန်သောအသက်တာကိုရှာသောသခင်၊ ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသောဗာတီးယေးယက်ကိုသာမကသင့်ကိုပါ ကျေးဇူးပြု၍ ကရုဏာပေးသည်။ သူသည်သင်၏အော်ဟစ်သံများကိုကြားပြီးသင်မည်သူဖြစ်ကြောင်းနားလည်ရန်ရှုထောင့်အသစ်ကိုပေးသည်။
Bartimaeus သည်အောက်ပါတို့အတွက်အားကောင်းသောနမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်မိမိကိုယ်ကိုမသိသောကြောင့်သူ့ကိုဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုပေးနိုင်သောသူအဖြစ်ယုံကြည်ခဲ့သည်။ သူသည်ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သခင်ယေရှု၏တပည့်တော်အဖြစ်သူ့နောက်သို့လိုက်ခဲ့သည်။
Cliff Neill ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်